Stainless simbi yakasvibiswa tub trolley
Stainless simbi yakasvibisa tub trolley F-30 Chikuru: 290mm (D) * 420mm (H) chinhu chikuru: 1. isina simbi yekuvakwa kwesimbi neplastikihubhu pamusoro; 2. chigadziko chine di.100mm swivel castors 3. Iyo yepurasitikihubhu inogona kuchinjirwa kuva simbi isina chinhu pane chakakosha chikumbiro. Ndokumbirawo urangarire kutibata nesu mutengo nekuda kwekuchinja uku.
isina tsvina IV tsvimbo yeM-4
isina chigadzirwa chesimbi IV tsvimbo yeM-4 chinhu chikuru: 1. isimbi yesimbi telescopic chubhu 2. kumusoro ne 4 chrome hook
IV imire (rudzi C)
IV imire (mhando C) chinhu chikuru: 1. isina chigadzirwa chesimbi denderedzwa chubhu uye ABS plastiki chigadziko; 2. kukwirira kunogona kugadziridzwa kubva 135cm kusvika 240cm; 3. kumusoro ne 4 chrome hook, ABS epurasitiki chigadziko chine castors
Pindirana chigaro F-44-2
Kukura: L1900 * W530 * H240 / 400mm main ficha: 1. epoxy yakafukidzirwa simbi simbi, yakakwirira mhando chipanje kumusoro neyekufukidzira ganda chifukidzo 2. chigaro chine castors 3. chigadzirwa ichi chinogona kushandiswa sechigaro nemubhedha.
Stainless simbi mbiri tsoka tsoka F-36-1
Kukura: L590 * W410 * H200 / 400mm 1. isina simbi yesimbi, kufukidza neABS rubha 2. tsoka ine anopesana neruzha rabara sheath.
Yakasarudzika yakasangana mattress F-36-3
Stool F-36-3 chikuru chiitiko: 1. kusiana kureba negasi chitubu kubva 480-620mm 2. chromed Base, matavi mashanu ane ma casters; 3. chigaro chiri Dia.320mm necushion pamusoro 4.knock pasi kuvakwa
Stainless simbi screen F-35
saizi: 2400mm (L) * 1680mm (H) main ficha: 1. isina simbi yesimbi, neinoshambidzwa machira machira 2. mana makona screen 3.ne castors
Maharaidhi ehafu-fowler mubhedha H-2
Saizi: L1930mm 2. ne zipper
Yakapetwa yakasanganiswa mateti H-13
H-13 Matress chifukidziro: PU isina mvura uye inogona kufema zvinhu Matress filler: Yepamusoro kutsungirira chipanje uye ndangariro foam
Electric mobile murwere kusimudza
DE-1C1 Zvikumbiro: ○ Izvi zvigadzirwa zvinoshanda kune varwere vakagara pamubhedha, uye varwere vane dambudziko rekufamba kana kusasimba mushure mekuvhiyiwa. Inogona kushandiswa nerubatsiro rwevanochengeta muzvipatara, nzvimbo dzinochengeterwa vakomana kana kumba. Vanotarisira vanogona kusimudza kana kufambisa murwere nekuvhiyiwa kamwechete, uye dhizaini yekuponesa vashandi inokwanisa kudzivirira kukuvara kwemashure kwemurwere kunokonzerwa nesimba risingaiti remuchengeti. Zvishandiso: ○ Iyo yakakosha furemu yakagadzirwa yakakwirira-yakasimba simbi chubhu ine hupfu ...